मतदाताको मनोविज्ञानमाथि सूक्ष्म विश्लेषण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मतदाताको मनोविज्ञानमाथि सूक्ष्म विश्लेषण
२०७० मंसिर १६, आईतवार ०३:०२ गते
शाब्दिक अर्थमा मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा यसले मनको विज्ञान अर्थात् आत्माको विज्ञानलाई जनाउ“छ । हरेक मानिसको मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु भनेको निकै जटिल कार्य हो, जुन आफैँमा समर्थ विज्ञान हो, जसबाट वैज्ञानिक कल्पनाहरु सिद्ध गर्न सकिन्छ । मनोविज्ञानबाट मानिसका संज्ञात्मक प्रक्रियाहरु, चिन्तनहरु, स्मृतिहरु, विचारहरु, मानसिक बिम्बहरु, तर्कहरु र निर्णयहरुको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । मनोविज्ञान मानिसका हरेक पक्षहरुस“ग जोडिन्छ । व्यक्तिका हरेक क्रियाकलापहरु, बानी र व्यवहारको आधारमा मनको निर्माण हुन्छ भने मनले नै मानिसका हरेक विचारहरुलाई निर्देशित गर्दछ ।
निर्वाचन पनि लोकतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ हो, जहा“ हरेक जनताको भोट निर्णायक बन्दछ । जनता सबैभन्दा शक्तिशाली त्यतिखेर हुन्छ, जब ऊ मतदाता बनेको हुन्छ । हरेक नेता मतदाताको घरदैलोमा हात जोड्दै पुग्नुका पछाडि त्यही शक्तिको आकर्षण हो । जनताले दिने भोटको शक्तिबाट नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित बन्दछ भने जनताको मतले प्रत्येक मतदातामा रहेको अन्तर्निहित शक्ति नेता वा दलको शक्तिमा रुपान्तरित हुन्छ । हरेक निर्वाचनमा कुन दल शक्तिशाली बन्छ भन्ने विषयलाई मतदाताको मनोविज्ञानले मुख्य प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक मतदाता उमेर, शिक्षा, पेसा, व्यवसाय, वातावरणको कारणले उनीहरुको मन तथा विचारको अवस्था पनि फरक–फरक हुन्छ, जसले गर्दा मतदाताको आवश्यकता, रूचि र चाहनाहरु पनि आफैँमा पृथक् बन्दछ । मनोविज्ञानकै कारणले उनीहरुले निर्वाचनमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने तथा कुन दललाई भोट दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्दछन् । जुन दलले धेरैभन्दा धेरै मतदाताको मन जित्छ, त्यही दल निर्वाचनमा विजयी बन्दछ । सबै दलहरुले मन जित्न गरेका प्रचारप्रसार तथा कार्यकर्ताको परिचालनबाट सबै राजनीतिक दल सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन ।
मतदाताको मनोविज्ञानले उनीहरुको व्यवहार, अनुभव तथा अन्य क्रियाकलापको विस्तृत अध्ययन गर्दछ । हरेक मानिस सामाजिक प्राणी हो, तसर्थ ऊ समाजमा बस्दा–रह“दा विभिन्न घटनाहरु, जानकारीहरु, अनुभवहरु प्राप्त गर्ने गर्दछ । हरेक मतदाताको व्यवहारहरुको स्वरुप अध्ययनलाई नै मतदाताको मनोविज्ञान भनिन्छ । अघिल्लो संविधानसभाभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताको मनोविज्ञानमा ठूलो परिवर्तन आएको पाइयो । अघिल्लो संविधानसभामा एकीकृत नेकपा माओवादी भर्खर युद्धमैदानबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । एकातिर उनीहरु विद्रोहबाट शान्तिमा रुपान्तरित हुँदै गरेकाले कार्यकर्ताहरुमा ऊर्जा, उत्साह थियो भने अर्काेतर्फ शिविरमा माओवादी लडाकुहरु रहेका थिए । एमाओवादी नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा जुनसुकै बेला लडाकुहरु शिविरबाट निस्कन सक्ने खतरा रहेको थियो, जसले गर्दा आममतदाताहरु एमाओवादीले केही गर्छ कि भन्ने आश तथा त्रास दुवैमा थिए । सबै राजनीतिक दलहरुले केही गर्न नसकेको अवस्थामा एमाओवादीले देशको रुपान्तरणको नारा बोक्नुलाई सबै मतदाताले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । जताततै माओवादीको लहर देखिएपछि उनीहरु देशकै ठूलो दलका रुपमा संविधानसभामा स्थापित बने ।
अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीले सबैभन्दा धेरै मत समाजको तल्लो गरिब, उत्पीडित वर्गको प्राप्त गरेको थियो, जुन मनोविज्ञान यसपटक बदलिएको छ । एमाओवादी टुक्रिएको कारणले पार्टीप्रति कार्यकर्ताहरुको आस्था र विश्वास धर्मराएको देखियो । सत्ता तथा शक्तिमा पुगेर आमकार्यकर्ताले आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न नसकेपछि धेरैजसो मतदाताहरु यसपटक एमाओवादीस“ग बिच्किएका थिए । पुरानै संसद्वादी दलहरुको बाटो अपनाउने हो भने त्यत्रो २०औँ हजार मानिसहरुको रगत र अरबौँको भौतिक संरचनालाई ध्वस्त पार्नुको औचित्य अझै एमाओवादीले मतदाताका माझमा पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । उनीहरु सत्तामा पुगे, आसेपासेहरुले त केही पाए तर अघिल्लो पटक एमाओवादीलाई भोट दिने आममतदाताहरुले केही नपाएको गुनासो सबैले गर्दै थिए ।
भावनात्मक रुपमा जातीय राज्यको नारामा कुद्ने कयौँ मतदाताहरु यसपटक निराश देखिए । पार्टीमा प्रतिबद्ध भएर विभिन्न निकायहरुमा बसेर काम गर्नेभन्दा बढी माओवादीको प्रचारप्रसारमा खासै बढी कोही देखिएनन् । यसपटक राजनीतिक दलहरुमा सक्रियभन्दा पनि भर्खर पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका तटस्थ मतदाताहरुको संख्या ठूलो थियो । माओवादीहरु सरकारमा पुग्दा विभिन्न सरकारी निकायमा, संस्थानहरुमा काम गर्ने अवसर पाएका कयौँ सरकारी कर्मचारीहरु भने यसपटक एमाओवादीको समर्थनमा मतदाताको लहरमा उभिन पुगे । गरिब र तल्लो वर्गका जनताभन्दा पनि उनीहरु सत्तामा रहँदा राजदूत, सचिव, उपसचिव, प्रहरी तथा सेनाका उच्च अधिकारी बनेकाहरु भने यसपटक माओवादीका सच्चा मतदाता बने । निर्वाचन अभियानलाई अध्ययन गर्दा एमाओवादीमा तल्लो वर्गका कयौँ गरिब, जनजाति मतदाताहरु गुमेर समाजका उच्चपदस्थ वर्गहरु त्यतातिर लालायित भएको पाइयो । राजनीति भन्ने विषय सत्ता र शक्तिको खेल पनि भएकाले कयौँ मतदाताहरु केही गर्ने र पाउने आशमा अझै एमाओवादीको समर्थनमा रहेका थिए । तर, यस निर्वाचनलाई उनीहरुप्रति उर्लिएको जनआस्था र जनविश्वास ओरालो लाग्दै गएको स्पष्ट संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ ।
वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभामा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी वि.सं. २०७० सालको संविधानसभामा आइनपुग्दै प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा थन्कन पुग्यो । ठूला नेता तथा कमजोर संगठनको कारण माओवादी पार्टीको शान तथा प्रतिष्ठा अहिलेको निर्वाचनपछि पानीको निर्बलिया फोकाजस्तै फुट्न पुगे । नेताहरुको रहनसहन तथा पार्टी नेतृत्वले गरेका कयौँ कुकृत्यहरुले मतदाताको मनोविज्ञानलाई तान्न सकेन । एमाओवादीलाई अघिल्लो संविधानसभामा अमूल्य भोट दिने कांग्रेस र एमालेका कयौँ मतदाताहरु यसपटक आफ्नै पुरानो पार्टीमा फर्किए ।
कुनै बेला देशका भावी राष्ट्रपति भनेर चर्चामा आएका एमाओवादी अध्यक्ष व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताको कारणले कयौँ मानिसहरु अझै उनको पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डलगायतका कयौँ नेताहरुको व्यक्तित्वका कारणले पनि कयौँ मतदाताहरु एमाओवादीप्रति आकर्षित देखिन्थे । नेपाली जनतामा उनीहरुप्रतिको क्रेज हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले विगतमा जनताले दिएको जनसमर्थनलाई जोगाएर राख्न सकेनन् । सधैँ जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको संकीर्ण सोचले गर्दा विगतको संविधानसभामा संविधान बन्न सकेन, तर फेरि त्यही एकल जातीय पहिचानको मुद्दालाई साथ बोकेका दलहरुले नेपाली जनताले भोट दिन चाहेनन् । शिक्षा, सञ्चार प्रविधिको विकासस“गै नेपाली मतदाताहरु निकै शिक्षित र सचेत देखिए । नेताहरुका हरेक क्रियाकलापहरुलाई केलाउ“दै राजनीतिक दलहरुलाई भन्दा पनि मतदाताहरुको रोजाइमा योग्य उम्मेदवारहरु परे । सबै पार्टीमा निर्वाचित बनेका प्रायःजसो अनुहारहरु नया“ नै देखिन्छन् । नेताले दिने गरेका झूटा आश्वासनलाई नेपाली जनताले निकै राम्रोस“ग चिन्न थालेको पाइयो । अन्य दललाई हेरियो पटकपटक एमाओवादीलाई हेरौँ यसपटक भनेर विगतमा भोट मागेको एमाओवादीलाई यसपटक भने नेपाली जनताले ठूलो शक्ति बनाउन चाहेनन् ।
कम्युनिस्टका गुलिया नारा तथा अभियानबाट वाक्क भएका कयौँ मतदाताहरु यो निर्वाचनमा कांग्रेसमा आकर्षित भएका छन् । धेरै प्रकारका कम्युनिस्ट पार्टीहरु तिनीहरुको फरक–फरक घोषणापत्र तथा आश्वासनहरुले गर्दा कयौँ मतदाताहरु अझै कुहिराको कागजस्तो बनेको देखियो । पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट नेतृत्वका कयौँ सरकारहरु असफल भएका कारणले पनि कांग्रेसप्रति आममतदाताको सहानुभूति बढ्दै गएको पाइयो । हिजोको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वले पीडित भएका जनताहरुले आजसम्म त्यो पीडालाई विर्सन सकेका छैनन् । हिजो माओवादी विद्रोहबाट पीडित भएका कयौँ मतदाताहरु अहिले कांग्रेसतिर आकर्षित भएको देखिए । माओवादी राजनीतिमा लागेर केही प्राप्त गर्न नसकेका कयौँ व्यक्तिहरु अहिले एमाले र कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा एमाओवादीको भोटमा कमी आयो । एमाओवादीले राखेका कयौँ आमसभाहरुमा अन्य पार्टी छोडेर आएका हजारौँ कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी प्रवेशको टीका र माला लगाए पनि त्यसको प्रभाव भने निर्वाचनमा पाइएन । हूल र भीडको राजनीतिमा रमाएको माओवादीले आफूलाई प्राप्त हुने भोटको सही आँकलन नै गर्न सकेन । प्रचण्डको मेची, काली अभियानमा दौडिएका केही आसेपासेको भीडबाट उक्सिएर एमाओवादीले दुईतिहाई ल्याउने होहल्ला ग¥यो, तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुन सकेन ।
विगतको संविधानसभामा ठूलो पराजय भोगेको एमालेको संगठन बलियो भएकाले पनि यसपटक निर्वाचनमा एमालेप्रति मतदाताको आकर्षण पाइयो । विगतको अल्पमतको सरकारमा रहँदा गरेका लोकप्रिय कार्यहरु र देशमा एमालेप्रति सद्भाव राख्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरु बढी भएकाले मतदाताहरु एमालेप्रति आकर्षित थिए । यसले विशेषतः नेपालमा मध्यम वर्गको भोट बढी पाइरहेको छ । अब छिट्टै एमालेले पार्टी पंक्तिलाई जुझारू र कुशल नेतृत्वदायी नबनाउने हो भने एमालेभित्र रहेका संगठित कार्यकर्ता अर्काे निर्वाचनसम्म जोगाउन गाह्रो देखिन्छ । विगतको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने एमाले जतिपटक गठबन्धन सरकारमा पुग्छ, त्यति जनताको नजरमा गिर्दै गएकाले पनि एमालेले सत्ताभन्दा पार्टी संगठनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।
हिजो काठमाडौँको सबै क्षेत्र जित्ने एमालेको बर्चस्व पछिल्ला वर्षहरुमा फुत्किँदै जानुको मुख्य कारण एमालेको संगठन तथा जनविश्वास कमजोर भएकोले नै हो । यदि नेपाली जनताले दिएको अमूल्य विश्वास र मतको एमालेले सम्मान गर्न नसकेमा भोलिको दिनमा उसको हालत अन्य साना दलको जस्तै हुन जाने निश्चित छ । दोस्रो संविधानसभामा भएको समानुपातिकतर्फ भएको मतगणनाको नतिजा हेर्दा त सबैभन्दा धेरै मत काठमाडौँबाट राप्रपा नेपालले ल्याएको छ, जसलाई हिन्दू धर्म र गाई चिन्हप्रति काठमाडौँका मतदाताले देखाएको असीम श्रद्धालाई संकेत गर्दछ । राप्रपा नेपालको मत धेरै आउनुमा राजतन्त्रभन्दा पनि नेपाली मतदाताहरुमा रहेको धार्मिक प्रभाव मुख्य जिम्मेवार रहेको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाभन्दा यसपटक तराईका मतदाताको मनोविज्ञानमा ठूलो उतारचढाव आएको छ । तराई आन्दोलनपछि आएको क्षेत्रीयता तथा जातीयताको नाराप्रति जनताको ठूलो विश्वास हु“दाहु“दै मधेसवादी नेताहरुले देखाएको पदलोलुपता, सत्ताका लागि गर्ने लुछाचुँडीले गर्दा मधेसका मतदाता वाक्क बनेको पाइयो । यसपटक क्षेत्रीय दलहरुभन्दा पनि एमाले र कांग्रेसको सिट संख्या मधेसमा बढेको छ । यो संविधानसभामा बैद्य पक्षको माओवादीलगायत अन्य ३३ दलले गरेको बन्दको आह्वान्ले गर्दा र ठाउ“ठाउ“मा विस्फोटका घटनाहरु भइरह“दा पनि अघिल्लो संविधानसभामा भन्दा यसपटक मतदाताहरुमा ठूलो उत्साह तथा सहभागिता देखियो । आममतदाताहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानसभाको गरिमाप्रति विशेष चासो राखेका थिए । मंसिरको चटारोमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि मतदाताहरु ढुक्कका साथ मतदान केन्द्रसम्म पुगेका देखिन्थे ।
सबै दलहरुको समग्र निर्वाचन अभियानलाई हेर्दा मतदाताको मनलाई जित्नका लागि सबैले निकै मेहनत र कष्ट गर्नुप¥यो । बाहिरबाट गएको भन्दा स्थानीयस्तरमा घुलमिल भएको उम्मेदवारको प्रभाव नै मतदातामा बढी देखियो । डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका कयौँ नेताहरु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित हुनुको मुख्य कारण पनि त्यही थियो । जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवार भए पनि स्थानीय जनताको सुखदुःखमा समावेश भएका उम्मेदवारहरु यसपटक मतदाताको प्रमुख रोजाइमा परे ।
मतदाताको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा अब पर्चा, पम्लेट र सडकमाथि ब्यानर झुन्ड्याएर चुनाव जित्ने दिनको अन्त्य भएको देखिन्छ । आममतदाताहरुले राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको भाषण सुन्ने चाहना पनि खासै राखेको पाइएन । अहिले त नेताहरु हात जोडेर नमस्कार गर्दै कोही मतदाताको खुट्टा समात्न पुगेको देखिए भने कयौँले विगतमा गरेको गल्ती, कमजोरीविरूद्ध माफी मागे । शिक्षा, मिडिया तथा सूचना प्रविधिको विकासस“गै अहिले नेपाली मतदाता साँच्चै सचेत र परिपक्व भएको देखियो । अहिले राजनीतिक दलहरु मतदातालाई रिझाएर मात्र मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । जनताहरुलाई अहिले दल र राजनीतिक एजेन्डाभन्दा पनि विकासको एजेन्डा मुख्य चुनावी मुद्दा हुन पुग्यो । विगतमा गल्ती गर्ने जनताका माझमा फर्केर पनि नजाने कयौँ नेताहरुलाई अहिले जनताले पराजित गरेका छन् भने यस निर्वाचनबाट सबै पार्टीमा नया“ युवा जमात स्थापित हुन पुगेका छन् ।
जुन पार्टीका जो–जो उम्मेदवार अहिलेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित बने पनि सबै दलका नेताहरुलाई यो निर्वाचनले ठूलो शिक्षा दिएको छ । झूटो आश्वासन, बल, पैसाको तुजुक देखाउने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने जनताको सुख–दुःखमा साथ नदिने उम्मेदवारले अब जनताको माझमा भोट माग्न सक्दैन । जुन उम्मेदवार विकास निर्माणका कामहरुमा सक्रिय भएर जनतास“ग घुलमिल हुन्छन्, त्यस्ता उम्मेदवारहरु मात्र जनताको रोजाइमा पर्छन् । मतदाताको आममनोविज्ञानलाई जित्न सकेमा नै कुनै पनि नेता वा पार्टी सधैँ लोकप्रिय रहन सक्छ । राजनीतिक दलहरु समयअनुसार चल्न र सोहीअनुसार पार्टी संगठन तथा नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दै लान सकेमा नै लोकतन्त्र संस्थागत हुन जान्छ ।